အန္တရာယ်ပိုများလာပြီး လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ရာနေရာ အဖြစ် အလားအလာ ရှိနေသော ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းများ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Camps Bring Further Danger to Rohingya Muslims Fleeing Potential Genocide in Burma
ဘင်္ဂလီ ဘယ်သူလဲ ? »
နိုဝင်ဘာ ၄ ၊ ၂၀၁၄
သံတော်လီ ဒုက္ခသည်စခန်းက မိမိအား စိတ်ထင့်စေသည်။ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးရသည့် ဒုက္ခသည်များနေထိုင်ရာ စခန်းများသို့ မိမိရောက်ဖူးသော်လည် လူမျိုးစု ရှင်းလင်းသုတ်သင်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည့် လူများ၏အကြားသို့ ရောက်ဖူးသည်မှာ ယခုအကြိမ်သည် ပထမဆုံးဖြစ်လေ၏။ ထိုဒုက္ခသည်စခန်းမှ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည့် ရိုဟင်ဂျာသုံးထောင်ကျော် နေထိုင်ရာအရပ်ဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာများမှာ လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စနစ်တကျ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကို ခါးစည်းခံခဲ့ကြရသည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် ငြင်းပယ် ခံရသည်။ ပေါ်တာဆွဲခြင်းခံရသည်။ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးများမှာ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းခံရသည်။ ထိုမျှမက သတ်ဖြတ်ခြင်းလည်း ခံကြရသည်။
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက ၎င်းတို့အား “ကမ္ဘာပေါ်တွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု အခံရဆုံးလူနည်းစု” အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများကမူ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု (Genocide) အထိ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု သတိပေးထားလေသည်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခဲ့သော စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် အဆုံးသတ်သွားပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အစွန်းရောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်ပေါ်လာ၏။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာလည်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည်။ ထိုအချင်းအရာများက မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ဆုံးတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ဆန်သည့် အနာဂတ်ဆီသို့ သွားရောက်တော့မည့် ပုံစံ ဖြစ်လာ၏။ အပြောင်းအလဲမျာ စတင်ပြီး နောက်တစ်နှစ်မှာပင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များအကြား
တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အနည်းဆုံး ၂၈၀ သေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၁၄၀၀၀၀ ခန့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အခြေအနေက ရှေ့ မတိုးသာ၊ နောက်မဆုတ် သာဖြစ်သွားသည်။ ရိုဟင်ဂျာများကတော့ ဒေသတွင်း ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ပိတ်မိနေသည်။ ၎င်းတို့အား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သူများ၏ သနားမှုကြောင့် ရွာများ၏ ဆင်ခြေဖုံးတွင် ကျူးကျော်နေထိုင်ရသည့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်လေ၏။
“ကျွန်တော်တို့ဟာ အကျဉ်းကျတဲ့သူတွေထက်ကို ဆိုးပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ အကျဉ်းသမားတွေဟာ အစာစား ရတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့က မစားရဘူး။ နောက်ထပ် ထမင်းတစ်နပ် ဘယ်တော့ စားရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိကြပါဘူး။”
ဒုက္ခသည်စခန်များသို့ရောက်ရန် ပြည်နယ်မြို့တော် စစ်တွေမြို့ပြင်ဘက်ရှိ တစ်ခုတည်းသာ စစ်ဆေးရေး ဂိတ်အား ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်ရသည်။ မီးရထားလမ်း လမ်းဆုံတွင် ရှေးဟောင်း ရိုက်ဖယ်သေနတ် ကိုင်ထားသော ရဲတစ်ယောက်က ထိုင်ခုံတစ်ခုတွင် ထိုင်နေ၏။ ပိုက်ဆံပေးပြီးသွားသောအခါ ဂိတ်အားဖြတ်ရန် ထိုရဲက လက်ပြခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့လည်း မွတ်စလင်များရှိရော ဒေသသို့ ၀င်ရောက်သွားခဲ့လေသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိရာသို့ ဦးတည်နေသော လမ်းမှာ ပျက်ဆီး၍ ချိုင့်များဖြစ်နေသည်။ ထိုလမ်းတစ်လျှောက် ကျွန်တော်တို့မှာ မွတ်စလင်ရွာများကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ လမ်းများပေါ်အထိ ရောက်နေသာ ပျံကျဈေးများ၊ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်နေကြသော လူများကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရသည်။
မိုးပေါက်လေးများက တဖွဲဖွဲကျနေ၏။ အကွေ့တစ်ခုသို့ ချိုးလိုက်ပြီးနောက် အပြာရောင်၊ အစိမ်းရောင် တာပေါ်လင်စများဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသော ဒုက္ခသည်များနေထိုင်ရာ တဲများကို စတင် တွေ့မြင်ရလေသည်။ ထိုနေရာမှာ ရေလွှမ်းထားသော လယ်ကွင်းခေါင်ခေါင်သာ ဖြစ်လေ၏။
ဒုက္ခသည်များအတွက် မုန်တိုင်း အဆီးအတားကတော့ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ဘေး တန်းစီပေါက်နေသော အုန်းပင်များပင် ဖြစ်တော့သည်။
သံတော်လီ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ လျှပ်တစ်ပျက်ကြည့် လိုက်လျှင် ပြန့်ကျဲပြီး စုတ်ချာကာ မသတီ စရာကောင်းသည့် ရွာအဖြစ် မြင်ရသည်။ စခန်းအတွင်းသို့ အ၀င်လမ်းမှာ ရွှံ့များဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေပြီး ဘေးတစ်ဘက် တစ်ချက်စီတွင် သွပ်မိုးတဲများရှိနေ၏။ အမျိုးသမီးများက ဟီဂျဘ်ဆောင်းထားကြပြီး အချို့၏ ပါးပြင်ပေါ်တွင် သနပ်ခါးဖွေးဖွေးများကို မြင်ရသည်။
၂ ယောက်သာနေထိုင်နိုင်သော တဲများ၌ မိသားစုအများအပြားနေကြရသည်။မိုးရာသီကလည်း ထိုစခန်းမှ ဘ၀များကို အတိဒုက္ခရောက်စေ သည်။ ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ နေထိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြ။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပင် အင်္ကျီမပါသည့် ကလေးများ ကျွန်တော့်အားဝိုင်းလာသည်။
ဗိုက်ပူပူများ၊ ဖျော့တော့တော့ ဆံပင်များက အဟာရ ချို့တဲ့မှုကို ဖော်ပြနေသယောင်။
ဒုက္ခသည်များက မိုးရာသီအား “ငှက်ဖျားရာသီ” ဟု ခေါ်ကြသည်။ ကျွန်တော်သွားသည့် နေရာတိုင်းတွင် ချောင်းဆိုးသံကို ကြားရလေသည်။ ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အမည်မဖော်လိုသူ ရိုဟင်ဂျာ ဆရာဝန်တစ်ဦးကတော့ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းက ဒုက္ခသည်များ အတွက် အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှုကြီးဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ဟာ အကျဉ်းကျတဲ့သူတွေထက်ကို ဆိုးပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ အကျဉ်းသမားတွေဟာ အစာစား ရတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့က မစားရဘူး။ နောက်ထပ် ထမင်းတစ်နပ် ဘယ်တော့ စားရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိကြပါဘူး။ ၀မ်းလျှောတာတွေလည်း အများကြီးဖြစ်နေတယ်။ အရေပြားရောဂါတွေနဲ့ အဆုတ်နာရောဂါတွေ လည်း ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒီစခန်းတစ်ခုတည်းမှာပဲ အနည်းဆုံး လူ ၂၀ လောက်ဟာ ကုသလို့ရတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ ဆေးခန်းကတော့ ဖွင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာမှ မရှိပါဘူး” ဟု အဆိုပါ ဆရာဝန်က ၎င်းတို့၏ ဒုက္ခအား ဖွင့်ဟခဲ့လေသည်။
သမီးဖြစ်သူ၏ မျက်လုံးကို လက်ဖြင့်ပိတ်ရန် အာမန်အား ရဲများက ပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရဲတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်က အာမန်၏ ခေါင်းပေါ်သို့ သေနတ်ပြောင်း တင်ကာ ပစ်သတ် လိုက်လေတော့သည်။
ပထမတော့ အဆိုပါလူများမှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှ လွတ်မြောက်လာပြီး ထိုခိုက်နာကျင်စရာ နည်းလမ်းမှ လွတ်မြောက်သွားသည်ဟု အလွယ်တကူ ယုံကြည်နိုင်သည်။ ဒုက္ခသည်များနှင့် စကားပြောသည့်အခါတွင်မှ ၎င်းတို့၏ အကြမ်းဖက်ခံရမှုအလုံးစုံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလာရလေသည်။
မကြာသေးမီကပင် မုဆိုးမဖြစ်သွားသော အမျိုးသမီး တစ်ဦးနေထိုင်ရာ တဲအတွင်းသို့ ကျွန်တော် ရောက်သွားသည်။ အသက် ၂၂ အရွယ် ခီရန်နီစာဆိုသူ ထိုအမျိုးသမီးက အမှောင်ထဲတွင် ကြိမ်ဖြင့်ရက်လုပ်ထားသော ဖျာကြမ်းပေါ်၌ ထိုင်နေ၏။ အဖြူရောင်ပိတ်စ လွှမ်းခြုံထားပြီး ပူဆွေးသောကရောက်နေသော သူမအား ဆွေမျိုးများက ဖေးမနေသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ ရက်က ဒုက္ခသည်စခန်းအပြင်ဘက်ရှိ အင်တာနက်ဆိုင်တွင် သူမမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရှမ်ဆူလ်အာမန်နှင့်အတူ ရှိနေ၏။ မလေးရှားတွင် ရှိနေသည့် ယောက္ခမဖြစ်သူကို ဖုန်းခေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ စကားပြောနေသည့်အချိန်တွင် လက်နက်ကိုင် ရဲများက အင်တာနက်ဆိုင်အား ၀ိုင်းလိုက်ပြီး ဆိုင်အတွင်းမှ လူများအားလုံးကို အပြင်ထွက်ခိုင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် လမ်းပေါ်တွင် ပုံစံထိုင် ထိုင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ မည်သူ့ကိုမှ နာကျင်အောင် မလုပ်ဟုလည်း ရဲများက ပြောခဲ့သေးသည်။ ရှမ်ဆူလ်အာမန်မှာလည်း လေးနှစ်အရွယ် သမီးငယ်ကိုဖက်ကာ ရဲများခိုင်းသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မိမိတို့ ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စအား မမြင်နိုင်စေရန်အတွက် သမီးဖြစ်သူ၏ မျက်လုံးကို လက်ဖြင့်ပိတ်ရန် အာမန်အား ရဲများက ပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရဲတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်က အာမန်၏ ခေါင်းပေါ်သို့ သေနတ်ပြောင်းတင်ကာ ပစ်သတ် လိုက်လေတော့သည်။
ရက်များစွာကြာသည်အထိ ထိုအဖြစ်အပျက်က ခီရန်နီဆာအား
တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေခဲ့သည်။ “ဘာ့ကြောင့် ကျွန်မယောင်္ကျားကို ပစ်သတ်ခဲ့တာလဲ။ သူ့မှာ ရန်သူမရှိပါဘူး” ဟု ပြောသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မိခင်ဖြစ်သူက သူမအား နှစ်သိမ့်ပေးနေရ၏။
မိုဟာမက်ဆိုသည့် အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးက ရဲများမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပင် ၎င်းတို့အား အကြမ်းဖက်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
“သူတို့က အကြောင်းအရာသေးသေးလေးတွေ၊ အမှားသေးသေးလေးတွေကို ရမယ်ရှာပြီး အရှက်ရအောင်လုပ်တယ်၊ ရန်စတယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းပေါ် ခြောက်ပြီးပစ်တာ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခါတည်း ပစ်သတ်တာမျိုးတွေ လုပ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းတို့၏ ခံစားရမှုများကို ပြောကြားခဲ့လေသည်။
၎င်းတို့က ညဘက်တွင် ပိုမိုကြောက်ရွံ့ကြသည်။ ရှမ်ဆူလ်အာမန်အား ပစ်သတ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သံတော်လီဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ရဲများက ၀င်ရောက်စီးနင်းကြသည်။ မိုဂျူမာ ဘေဂွမ်တစ်ယောက် ၀င်ပေါက်နားရှိ ၎င်း၏ ဆိုင်ကိုပစ်ကာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် သားဖြစ်သူတို့အား သွားရောက်
သတိပေးလေသည်။ နောက်ထပ်အသတ်ခံရသူများ ဖြစ်လာမည်ကို ကြောက်ရွံ့သည့်အတွက် ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ လယ်ကွင်းထဲတွင် သွားရောက်ပုန်းအောင်းနေကြရသည်။ ဘေဂွမ်က သူမ၏ ဆိုင်ရှိရာ ပြန်လာသည့်အခါမှာတော့ ရဲများက သူမ၏ဆိုင်အား မွှေနှောက် ရှာဖွေနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထိုမျှမက သူမကိုလည်း သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြီး ဆိုင်တွင် ရှိသမျှအရာအားလုံးကိုလည်း ယူဆောင်သွားလေသည်။
ကျွန်တော်နှင့် စကားပြောခဲ့ပြီး အမည်မဖေါ်လိုသူ ရိုဟင်ဂျာတစ်ဦးက သံတတော်လီဒုက္ခသည်စခန်းအား နာဇီတို့၏ အကျဉ်းစခန်းကဲ့သို့ ဖြစ်နေ သည်ဟု ပြောဆိုလေသည်။ ဥရောပကို သိမ်းပိုက်စဉ်က နာဇီတို့၏ အကျဉ်းစခန်းများကဲ့သို့ သံဆူးကြိုးများခတ်ထားခြင်း၊ ကင်းမျှော်စင်များ တည်ဆောက်ထားခြင်း မရှိ။ ဤဒုက္ခသည်စခန်းများ အတွင်းမှာတော့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်လေသည်။ လက်နက်ကိုင် ရဲများကို မကြာခဏတွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့၏ တည်ရှိမှုမှာ တစ်ခဏတာ ဖြစ်လေသည်။ မည်သည့်အရာများ ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို လျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်နေကြပြီး သံဆူးကြိုးများ မလိုအပ်တော့။
ရိုဟင်ဂျာများမှာ စစ်အစိုးရလက်ထက် မြန်မာပြည်အခြေအနေကဲ့သို့ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်း ခံထားရသည်။ ဒုက္ခသည်စခန်းခေါင်းဆောင်များမှာ ရဲများက ၎င်းတို့နှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ရန် ရွေးချယ်ထားသော ရိုဟင်ဂျာများဖြစ်သည်။ ထိုသူများအား မိုဘိုင်းဖုန်းများပေးထားပြီး စခန်းအတွင်း လူဦးရေနှင့်ပတ်သက်၍ လျှို့ဝှက် စောင့်ကြည့်ရန် အမိန့်ပေးထားသည်။
“သူတို့ဟာ အစိုးရ သတင်းပေးတွေလိုပါပဲ” ဟု ဒုက္ခသည်တစ်ဦးက ပြောခဲ့လေသည်။
မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီက အဆိုပါ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ၁၀ ရက်ကြာ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးနောက် သူမ၏ တွေ့ရှိချက်များကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့ မကြာသေးမီကပင် တင်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ စခန်းများမှ မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာကောင်းသော နေရာများဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့လေသည်။ ယန်ဟီး၏ အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းအတွက် သတိပေးထားပြီး လက်တန်း သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊ ပေါ်တာဆွဲခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခြင်းနှင့် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း အပါအ၀င် ရိုဟင်ဂျာများ ဆက်လက်ခံစားနေရသည့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုလည်း စာရင်းပြုစုကာ တင်ပြခဲ့သည်။
“အစိုးရအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို ကျေပွန်ရပါမယ်” ဟု ယန်ဟီးက ဖော်ပြထားပြီး ရိုဟင်ဂျာများအတွက် အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအကူအညီ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အစားအသောက်၊ သောက်သုံးရေ၊ မိလ္လာစနစ်နှင့် ပညာရေးစနစ်များအပါအ၀င် အခြေခံရပိုင်ခွင့်များကို လုံလောက်စွာပေးအပ် ရန်လည်း ဖော်ပြထားသည်။
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ Human Rights Watch မှ ဖီလ်းရော်ဘတ်ဆန်က ရိုဟင်ဂျာအရေး ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြန်မာအစိုးအရအား ဖိအားပေးရမည်ဟု ဆိုသည်။ မေးခွန်းတစ်ခုက “ရိုဟင်ဂျာများမှာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ အခြားသော ပြည်သူများနှင့်အတူ စားပွဲဝိုင်းတွင်း တန်းတူထိုင်ရန် ထိုက်တန်သည်ကို လက်ခံမည်လား” ဆိုပင်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
လူမျိုးသတ်မှတ်ခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာအတွက် အဓိကအချက်ဖြစ်နေသည်။ ယခုနှစ်မတ်လက နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပထမဆုံး သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုကို အငြင်းပွားမှုများကြားမှ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့သော်လည်း ရိုဟင်ဂျာများမှာ ဘင်္ဂါလီဟု သတ်မှတ်ခြင်းကို လက်မခံပါက သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ချန်လှပ်ခြင်းခံရသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ဗဟိုအစိုးရတို့က ရိုဟင်ဂျာများမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသူများသာဖြစ်ကြသည်ဟု ယခင်ကတည်းက သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာများကတော့ မိမိတို့၏ လူမျိုးအမည်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါက တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ခြင်းခံရမည်ကို စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့နေကြလေသည်။ ကုလသမဂ္ဂက အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးမှာ မြန်မာအစိုးရအရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ရိုဟင်ဂျာဟူသော စကားလုံးကို မသုံးနှုန်းရန် အကြိမ်ကြိမ်မေတ္တာရပ်ခံခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
“ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအမည်ကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ဖို့ဟာ လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေရဲ့ အဓိကစည်းမျဉ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ယန်ဟီးက ပြန်လည်ချေပ ပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကတော့ အပြောင်းအလဲကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသော ကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ “ပိုပေါ့ မတိုင်ခင်ကာလ” “ပိုပေါ့ပြီးနောက်ကာလ” ဟု ၎င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံများအား သီးခြားစီ ပြောပြကြသော ကမ္ဘောဒီးယား လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုမှ လွတ်မြောက်လာသူများကဲ့သို့ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သမျှ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ရခိုင်လူမျိုးများမှာ “အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု မဖြစ်ခင် အခြေအနေ” နှင့် “အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး အခြေအနေ” တို့ကို ပြောဆိုကြသည်။
တင်းမာမှုများမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းခဲ့သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မွတ်စလင်သုံးဦးမှ မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်သည်ဆိုသည့် သတင်းက ကနဦး မငြိမ်မသက်မှုကို ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုမငြိမ်မသက်မှုက ပြည်နယ် တစ်ဝှမ်း ပြန့်နှံ့သွားလေသည်။ စစ်တွေတွင်တော့ တုတ်များ၊ ကျောက်ခဲများ ကိုင်ဆောင်ကြသည့် လူအုပ်ကြီးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲရသည်။ ရဲအချို့မှာ ရိုဟင်ဂျာများအား ဦးတည်သည့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံကြရသည်။
“ကျွန်မတို့အပေါ်မှာ ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာဟာ ရခိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းပါ” ဟု ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားနှင့် လက်ထပ်ထားပြီး အစ္စလာမ်သာသနာသို့ ပြောင်းလဲသက်ဝင်ထားသည့် ကြည်ကြည်အောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမမှာ ယခုအချိန်တွင် သက်ကယ်ပြင်ဒုက္ခသည်စခန်း၌ ခင်ပွန်း၊ သားသမီးများနှင့်အတူ နေထိုင်နေရသည်။ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုမှ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးစားစဉ်က ကျိုးသွားခဲ့သည့် သူမ၏လက်ကို ကျွန်တော့်အားပြသည်။ လက်ကောက်ဝတ်၌ ဆိုးဆိုးရွားရွားပင် ရွဲ့စောင်းနေလေသည်။ အကြမ်းဖက်သမားများက သူမအိမ်ကို မီးရှို့ခဲ့ပြီးနောက် မီးလောင်နေသောအိမ်မှ ထွက်ပြေးစဉ် ရခဲ့သည့် ခြေထောက်မှ မီးလောင် ဒဏ်ရာကိုလည်း ပြသည်။ သူမနှင့် မိသားစုသာလျှင် ထိုအိမ်ထဲမှ ထွက်လာနိုင်ခဲ့လေသည်။“ကျွန်မတို့ အားလုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်” ဟု သူမကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများတွင် အစိုးရက ခွဲခြားအုပ်ချုပ်ရေး (divide and rule) ဗျူဟာကိုအသုံးချသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မိမိတို့အား ဆန့်ကျင်ရန် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက လူအများအပြားစုရုံးနိုင်သည်ကို အစိုးရကသိသည်။ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး သဘောထားကို ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြင့် ပြည်နယ်အတွင်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီး ရိုဟင်ဂျာပြဿနာဖြင့်ပင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများမှာ အာရုံပြောင်းခံထားရလေသည်။
ပြုပြောင်းလဲရေး မပြုလုပ်ခင်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာရှင်စနစ်မှာ အားလုံးနီးပါးကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး သဘောထားကွဲလွဲဆန့်ကျင်မှုကိုလည်း ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်မတ်လက ဗုဒ္ဓဘာသာ လူအုပ်စုကြီးမှာ စစ်တွေမြို့တွင် သောင်းကျန်းခဲ့ကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာများကိုသာ ဦးစားပေးသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရုံးခန်းများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
Malteser Internatioal အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့မှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ၎င်းတို့၏ ရုံးခန်းပေါ်မှ သာသနာ့အလံကို ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ရာမှ ဆူပူအုံကြွမှု စခဲ့လေသည်။ ရိုဟင်ဂျာလူ့အဖွဲ့အစည်းအား ဆန့်ကျင်သော အမှတ်အသားအဖြစ် သာသနာ့အလံများကို ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး လွှင့်ထူကြသည်။
လူအုပ်စုကြီးက အကူအညီပေးရေး ရုံးခန်းများကို တိုက်ခိုက်သည့်အခါ အာဏာပိုင်များက ၀န်ထမ်းများအား ကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အား ထွက်သွားစေချင်သည်မှာ ထင်ရှားလေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်တော့ ရခိုင်အမျိုးသားရေးဝါဒီများက ၎င်းတို့သာလျှင် စတေးခံရသူများ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆနေကြသည်။ တစ်ဖက်တွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် အခြားတစ်ဖက်တွင် တိုးပွားလာသည့် မွတ်စလင်လူဦးရေအကြား ၎င်းတို့မှာ အကြပ်ရိုက်နေသည်ဟု ယုံကြည်နေ၏။ ရိုဟင်ဂျာများက အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှုဟု ၎င်းတို့က ရှုမြင်လေသည်။ ထိုသို့ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေကြသော်လည်း မွတ်စလင်များက မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိလေသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသူများရှိသော်ငြား ထိုပမာဏမှာ ရခိုင်အမျိုးသားရေးဝါဒီများ ထင်ထားသကဲ့သို့မဟုတ်။
“သူတို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်သူပါ” ဟု လက်ယာစွန်းရောက် ရခိုင်အမျိုးသားရေး ပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရွှေမောင်က ဆိုလေသည်။ အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်ပြီဖြစ်သည့် သူက အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အစ္စလာမ့်မစ်အုပ်စုများ ပေါ်ထွက်လာမှုကို ထောက်ပြသည်။ ရိုဟင်ဂျာများမှာ အစ္စလာမ်နိုင်ငံ တစ်ခု ထူထောင်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ၎င်းက ယုံကြည်နေလေသည်။
“မွတ်စလင်တွေဟာ သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံစည်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပျောက်သွားမှာကို ကြောက်ပါတယ်” ဟု ဦးရွှေမောင်က ပြောကြားခဲ့လေသည်။
အခြေအနေတင်းမာအောင် ဆောင်ရွက်ထားမှုမှာ အစိုးရ၏ အကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှ တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသို့ သွယ်တန်းထားသည်မှာ ကျောက်ဖြူ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပရောဂျက်တွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ ကုန်းတွင်း ရေနံတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းများပါဝင်ပြီး တန်ဖိုးမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းချမှုမှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်မှာ ဒေါ်လာ ၃.၃ ဘီလီယံရှိသည်ဟု ဇွန်လတွင် အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို ကိုယ်တိုင် ပုံဖေါ်ခွင့်မရပါဘူး” ဟု ဦးရွှေမောင်က ဆိုလေ၏။
စက်တင်ဘာလက အလ်-ကိုင်းဒါအဖွဲ့မှာ မြန်မာအပါအ၀င် တောင်အာရှမှ မွတ်စလင်များအနေဖြင့် နိုးကြားပြီး ဂျီဟတ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဆော်သြခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုခြင်းမှာ နိုင်ငံအတွင်း အမုန်းမီးတောက်အား ပိုမို လောင်မြိုက်စေခြင်းပင် ဖြစ်လေ၏။ ထိုအချိန်မှစ၍ ရိုဟင်ဂျာများ ဖမ်းဆီးခံရမှုများ၊ ပျောက်ဆုံးမှုများနှင့် အာဏာပိုင်များက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ ပြုလုပ်သည်ဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာလေသည်။ ထိုကိစ္စအတွင်း ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားတစ်ယောက် အသတ်ခံခဲ့ရပြီး ၎င်း၏ ဇနီးမှာလည်း ဖိအားပေးခံခဲ့ရပြီး ခင်ပွန်းသည်မှာ ဓမ္မတာအတိုင်းသေခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးများက မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးသဘောထားကို ပိုမိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ၎င်းတို့အများစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု၏ နောက်လိုက်များ ဖြစ်လေသည်။
ထိုနံပါတ်မှာ ပိုမိုအစွန်းရောက်သော နိုင်ငံခြားကြောက်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၏ အမှတ်တံဆိပ်လည်း ဖြစ်လေသည်။
လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Fortify Rights က ရိုဟင်ဂျာများကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမှာ အစိုးရ၏ ပေါ်လစီဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ စာမျက်နှာ ၇၂ မျက်နှာပါဝင်သည့် ၎င်းတို့ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတွင် လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုများဟု သတ်မှတ်၍ရသည့် ပေါ်လစီများအား အကြီးတန်းဝန်ကြီးများက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးမှုများကို ဖော်ပြထားသည်။ ထိုပေါ်လစီများတွင် ရိုဟင်ဂျာများအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် လုံခြုံရေးတပ်များအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များလည်း ပါဝင်လေသည်။ ထိုအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ မက်သယူး စမစ်က ပေးပို့သော အီးမေးလ်တွင် “လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအတွက် ကြိုတင် သတ်မှတ်ချက်များ တွေ့နေရသည်” ဟု ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခေတ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ လာရောက်ရသည်မှာ စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်သော မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လာရ သကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ပြည်သူများမှာ ကြောက်ရွံ့မှု တွင် နေထိုင်ရသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်ကတော့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ခြိမ်းခြောက်မှုကြီးနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဟု မမျှော်လင့်။
မိမိတို့၏ သဘောထားကို ဖွင့်ပြောရန် ကြောက်ရွံ့နေကြသည့် အလယ်အလတ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက ထိုလုပ်ရပ်အား လက်မခံ။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့က အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒီများ၏ ပစ်မှတ်ထားခံရမှုကို ကြောက်ရွံ့နေလေ၏။
ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ကျွန်တော်စရောက်သည့်နေ့မှာ ကမ္ဘောဒီယားတွင် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သော ခမာခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးအား လွန်ခဲ့သည့် ၃၅ နှစ်က ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှု အတွက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည့်နေ့ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးက ကြည့်ရုံသာကြည့်နေချိန်တွင် လူပေါင်း ၈ သိန်းကျော် အသတ်ခံရသော ရ၀မ်ဒါ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုကြီး ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်မှာလည်း နှစ် ၂၀ ပင် ရှိခဲ့သည်။ ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးဖြစ်သူ သီယာရီ ကရူဗဲလ်လီယာက ဒီလိုရေးခဲ့သည်။
“လက္ခဏာတွေအားလုံး ရှိနေတာတောင်မှ လူတွေက အဆိုးဆုံးဟာ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ပါဘူးလေလို့ မှတ် ထင်ကြပါတယ်” ဟူ၏။
ယခုအချိန်တွင် အခြေအနေက အစွန်းတစ်ဘက်တွင် ရှိနေသည်။ စစ်တွေတွင် အခြေအနေက ပုံမှန်ဖြစ်နေသည်။ သို့ရာတွင် မြို့တွင်း၌ မွတ်စလင်တစ်ယောက်ကိုမှ မမြင်ရတော့။ ၎င်းတို့မှာ ရဲများထိန်းချုပ်ထားသော ဂတ်တိုများ၊ မြို့ပြင်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်သာ နေထိုင်ရသည်။ တစ်ချိန်က ၎င်းတို့နေထိုင်ခဲ့သော မြို့တွင်းရှိ ရပ်ကွက်မှာ လွင်တီးခေါင်ပြင် ဖြစ်နေပြီး အပင်များက နေရာယူထားလေသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာ အနည်းငယ်ကမူ ယခုကဲ့သို့ ခွဲခြားထားမှုအတွက် သံသယရှိနေလေ၏။
“အစွန်းရောက်တွေက လူမျိုးစု သုတ်သင်ရေး လုပ်ချင်ကြတာပါ။ သူတို့ဟာ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ချင်ကြတာပါ” ဟု မိုဂျူမာ ဘေဂွန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
သူ၏ကြောက်ရွံ့မှုမှာ မှန်ကန်ကြောင်း ရခိုင်လူငယ်တစ်ဦး၏ စကားက ထောက်ခံအတည်ပြုနေလေ၏။
“မွတ်စလင်တွေကို ကျွန်တော်သတ်ချင်တယ်။ လူတော်တော်များများလည်း ကျွန်တော့်လိုပါပဲ။ ကျွန်တော်သူတို့အားလုံးကို ရှင်းပစ်လိုက်ချင်တယ်” ဟု ရခိုင်လူမျိုး အောင်ကိုနိုင်က ၎င်း၏ ဆန္ဒကို ဖွင့်ဟခဲ့လေတော့သည်။
ကမ္ဘာကျော် News Week သတင်းဌာနတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ဆောင်းပါးရှင် Nic Dunlop ၏ “Camps Bring Further Danger to Rohingya Muslims Fleeing Potential Genocide in Burma” ဆောင်းပါးကို လေးမောင် (M-Media) မှ ဆီလျော်အောင် မြန်မာပြန်ဆိုသည်။
This entry was posted on November 5, 2014 at 5:25 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.